Maashinni kitaaba akka sagalee nama barreesseetti ol fuudhee dubbisu kalaqame - BBC News Afaan Oromoo
Maashinni kitaaba akka sagalee nama barreesseetti ol fuudhee dubbisu kalaqame
Image copyright Sogou
Goodayyaa suuraa Dubartii iskiriinii dura nama ishee fakkaatu fuula dura dhaabbataa jirtu
Chaayinaatti toorri ittiin interneeta barbaaddatanii (search engine) Sogou jedhamu Artifishaal Intelijensii (AI) akka namaatti sagalee nama barreesseetiin asoosamoota sagalee ol fuudhee dubbisu kalaqeera.
Baruma darbe ammoo, Sogoun AI kan oduu akka namaatti dubbisan lama kalaqanii turan. roobootiiwwan oduu dubbisuuf tolfaman kunneenis burqaa oduu mootummaa Chaayinaa Shiinuhaatiin faayidaarra oolaa jira.
Chaayinaa keessatti fedhiin kitaabota sagaleetti jijjiiramaniif jiruu haalaan dabalaa dhufeera. Kun biyyoota Lixaa keessatti kan ta'aa jiruun haala walfakkaatuun dabale.
Dhaabbanni beekumsa sabaa Chaayinaa 'iiMedia' gabaan fedhii kitaaba sagaleen dhiyaatuu waggoota 2016 hanga 2020 gidduutti dachaa oliin dabaluun, gabaan isaa gara yuan Biliyoona 7.8 ykn Paawondii miliyoona 900tti akka guddatu eega.
Amma teeknooloojiin kitaaba barreeffamaa gara dubbii afaaniitti saffisaan jijiiruun sagaleedhaan kitaabota bifa digitaalaan viidiyoonis ta'e sagaleen argachun salphaadha.
Haata'u malee, namoonni harki caalaan kitaabota sagaleedhaan qophaa'an barreessitootaan, warra taatoo fiilmii/diraamaa ta'aniifi namoota hawaasa keessatti beekamaniin " Oogummaadhaan seeneffaman" barbaadu.
Kana waan ta'eef, kalaqawwan yeroo ammaa kitaabota maashinaan sagalee namuma barreessee fakkeessuun barreefama gara dubbii afaaniitti jijjiiruu kun baayyee fudhatama argataa dhufeera.
Sagaleen barreeffama kitaabotaa jijjiiraman kanuma namaa isuma sirrii fakkaatu.
Fakkeenyaaf, kampaaniin Lyrebird maamiltoonni isaa akka sagalee fakkeessanii uummatan ni hayyama. Sagalee daqiiqaa tokkoo irraa "sagalee nam-fakii" akka baafatan taasisa.
Marsariitii isaarratti, tajaajila kana sagalee waraaban lama tokko kan Pirezedaantii US duraanii Baraak Obaamaa, tokko ammoo kan Pirezedaantii US kan yeroo ammaa Doonaald Tiraamp agarsiisuun maashina ittiin baratan fayyadamuun uuman.
Kun osoo kanaan jiruu, hojiin kalqaa jalqabiirra jiru 'DeepZen' jedhame akka jedhetti tekinooloojiin dubbii nam-tolchee sa'aa muraasa keessatti kitaabota sagalee hedduutti qopheessuu ni danda'a. Kun ammoo yeroofi baasii 90% hir'isuu danda'eera.
Yeroon 'Facebook' fi 'Instagram' irratti dabarsinu murta'aa ta'uuf jedhame